Iintetho ze-GNOME malunga nokuphuculwa kwe-libadwaita, i-Circle Apps kunye nePhosh | Ubunlog
Iintetho ze-GNOME malunga nokuphuculwa kwe-libadwaita, i-Circle Apps kunye nePhosh
IPablinux | 02/10/2021 11:08 | gnome, Ubuntu
GNOME esidlangalaleni ubusuku bokugqibela ukungena kwenombolo 12 yeendaba ebezisemhlabeni wakho kwezi ntsuku zisixhenxe zidlulileyo. Azininzi njengoko i-KDE isixelela, kodwa ziifilosofi ezahlukeneyo. Ngelixa i-KDE isixelela okuninzi okuzayo, i-GNOME incokola malunga nokuncinci, kodwa sele kwenzekile. Umzekelo, kwiintsuku ezisixhenxe ezidlulileyo bathethile ukusukela ekufikeni kwe-GNOME 41, indawo yemizobo abasebenzisi be-Ubuntu 21.10 abangayi kuba nakho ukonwabela ngokusemthethweni.
Phakathi kwezona zinto zinomdla kwezi zilandelayo uluhlu lweendaba sinento eza kwizixhobo eziphathwayo. I-Phosh yi-interface esekwe kwi-GNOME, kwaye iinguqulelo zamva nje zibonisa i-icon yesicelo xa ivulwa. Ukuthelekisa kuyothusa, kodwa yinto endiyibonileyo kwiPlasma Mobile ubuncinci unyaka. Ayinamsebenzi ukuba umbono uvelaphi, ujongeka ulungile kwaye into elungileyo kufuneka isetyenziswe.
I-libadwaita ngoku ibonelela ngolwandiso lwekhasi le-GtkInspector lokuvavanywa kwenkqubo yemibala kunye nemodi yokuthelekisa ephezulu. Oku kunokuba luncedo kuvavanyo lwezikimu zemibala ngaphandle kwe-GNOME 42 yeseshoni yokwakha okanye i-GNOME OS VM.
Iziqwenga zombhalo zingene kwisangqa seGNOME. Amagqabantshintshi okubhaliweyo akuvumela ukuba usebenzise "izixhobo" ezichazwe kwangaphambili kunye neziqhelekileyo kwisicatshulwa. Imizekelo yezixhobo ezibandakanyiweyo zezi, uguquko lwe-JSON ukuya kwi-YAML, uhlobo, ukukhangela kunye nokubuyisela endaweni, okanye ukumiliselwa kwe-Base64, phakathi kwabanye.
IBlanket 0.5.0 ngoku iyafumaneka kwiFlathub. Kuza nophuculo oluninzi njengokukwazi ukwenza ii-presets, ukutshintsha izandi ngokulula, ukhetho lwendlela emnyama, kunye neenguqulelo ezili-13 ezintsha.
UPhosh ngoku ubonelela ngempendulo kwangoko xa usungula usetyenziso ngokubonisa iscreen sokutshiza.
I-Fly-Pie, ulwandiso lwemenyu yokumakisha ye-GNOME Shell, ihlaziyiwe ukuxhasa i-GNOME Shell 40+. Ingasetyenziselwa ukwazisa usetyenziso, ukulinganisa ii-hotkeys, ii-URL ezivulekileyo, nokunye okuninzi ngokuzoba izijekulo. Inguqulelo entsha ikwabandakanya umhleli wemenyu ye-WYSIWYG enomdla ngakumbi.
Imozulu, isimilo kunye nokusetyenziswa kwediski yokuhlalutya iiapps ngoku ixhasa inkqubo entsha ebanzi yesitayile esimnyama.
Kwaye ibiyiyo yanamhlanje. Kulabo bacinga ukuba akwanele, kufuneka kukhunjulwe ukuba la manqaku eveki ngeveki e-GNOME athetha ngezinto esele zenzekile, kwaye ezo nkcukacha zinje ngeendaba zommandla wokuzoba azifakwanga.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » Iidesika » gnome » Iintetho ze-GNOME malunga nokuphuculwa kwe-libadwaita, i-Circle Apps kunye nePhosh
Uvavanyo lweGtkStress, lwenza iimvavanyo zoxinzelelo kwizixhobo zokusebenza